လူငယ်နှင့် ရွေးချယ်မှု - Myanmar Network
Posted by AungKoU (UMK) on February 5, 2013 at 11:47 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ဒီလထုတ် UMK School မဂ္ဂဇင်းအတွက် ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါး ပါ၊
online ပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
လူတိုင်းသည် မွေးဖွားချိန်မှ သေဆုံးချိန်အထိအသေးအဖွဲ့ကိစ္စများမှ ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စများအထိ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ရွေးချယ်မှုများပေါင်းများစွာနှင့် တွေ့ကြုံ ကြရပါသည်။ မိမိ၏ ရွေးချယ်မှု အပေါ်မူတည်၍ အကောင်း၊ အဆိုးများကို စံစား၊ ခံစား ကြရပါမည်။ သို့ပါ၍ အသေးအဖွဲ့ ကိစ္စများမှသည် ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများအထိအရာရာကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ကာရွေးချယ်ကြရပါမည်။
လူငယ်များအတွက် ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူနားလည်သလောက် တင်ပြလိုပါသည်။ ပညာသင်ကြား ကြသောလူငယ်များသည် ဆယ်တန်းအောင်မြင်သည့် အချိန်တွင် တက်ရောက်လိုသည့် ဘာသာရပ်၊ တက္ကသိုလ် စသည်တို့ကို စတင် ရွေးချယ်ကြရပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု ဖြစ်သည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ အလွန်နည်းမည်ဟု စာရေးသူယူဆပါသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကသော်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်းဂုဏ်ရှိသည်၊ ဝင်ငွေကောင်းသည် အစရှိသဖြင့် ယူဆသောအလုပ်မျိုးကိုမဆိုလိုပါ။ မိမိရည်သန်ရာ၊ မိမိအမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားရာ၊ ဝါသနာပါရာအလုပ်ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆယ်တန်း အောင်မြင်သည့် အချိန်တွင် မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးသလို၊ မိဘပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လွှမ်းမိုးမှု အောက်မှာ အများစုရွေးချယ်ခဲ့ကြရပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိဘကရော၊ ကိုယ်ကိုတိုင်ပါ ဘာမှန်းမသိဘဲ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသူများပင် ရှိပါသည်။ (မိမိရည်သန်ရာ နယ်ပယ်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲ ရရှိသည့်အမှတ်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရသည်ကလည်းရွေးချယ်မှု မှားယွင်းကြရသည့် အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။)
တက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံး၍ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မည့်အချိန်တွင် ထပ်မံရွေးချယ်ကြရပြန်ပါသည်။
ဆယ်တန်းအောင်မြင်စဉ် မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သူများက လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မည့် အချိန်တွင် မိမိရည်သန်ရာပန်းတိုင်ကို အရှိန်မြင့်လျှောက်လှမ်းရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်သူများ (ဆန္ဒနှင့် ရွေးချယ်မှု တစ်ထပ်တည်းမကျခဲ့သူများ) အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ရွေးချယ်ခွင့်သည် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ မိမိသင်ယူခဲ့သော ပညာရပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုမည်လား? (သို့မဟုတ်) မိမိဝါသနာပါရာအလုပ်ကို ရွေးချယ်မည်လား? ဆိုသည်မှာ သေသေချာချာ စဉ်းစားရပါမည်။ သင်ယူခဲ့သောပညာရပ်နှင့် ဆက်လက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လိုလျှင်လည်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတိုင်အတာတစ်ခုအထိ ဆက်လက် လေ့လာဆည်းပူးလေကျင့်ကြရပါမည်။ သိုသော် မိမိဝါသနာပါရာ၊ စိတ်ဝင်စားရာမဟုတ်ဘဲ ငွေမျက်နှာကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်လျှင် အလုပ်ဟူသည် ဘဝနှင့်အတူ အမြဲတမ်းရှိနေမည် ဖြစ်သောကြောင့် တွေ့ကြုံလာသော အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရန် ခံနိုင်ရည် မရှိဘဲ လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်သွားတတ်သည်ကို အထူး သတိပြုရပါမည်။
မိမိစိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းကို ပြောင်းလဲကာ ရွေးချယ်မည်ဆိုပါလျှင်လည်း တက္ကသိုလ်တွင် ရင်နှီးမြှပ်နှံခဲ့ရသောအချိန်၊ ငွေ တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ကြရပါမည်။ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အခြေကျစေရန် အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ခန့် အချိန်ယူရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံရင်နှီးမြှပ်နှံရမည့် အချိန်၊ ငွေကြေး အတိုင်းအတာများကိုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက် ရပါမည်။ အကယ်၍သာ ထပ်မံမှားယွင်းခဲ့လျှင် အချိန်အလွန်နည်းသွားပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းပြီးချိန်တွင် အသက်က ၁၉ - ၂၃ နှစ်ဝန်းကျင် နောက်ထပ် ၃ နှစ် ထည့်ပေါင်းလျှင် အသက် က ၂၁-၂၅ နှစ်ဖြစ်နေပါပြီ၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလုပ်ငန်းခိုင်မာရန်အတွက် ကြိုးစားပြင်ဆင်ချိန် နောက်ထပ် ၃ နှစ် ထပ်ပေါင်းပါက ၂၃ - ၂၈ နှစ် ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ၂၅ - ၂၈ နှစ် အများဆုံး ၃ဝ - ၃၂ နှစ်အတွင်း ဘဝအတွက် အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ရပါလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင် မှားယွင်းခဲ့လျှင် ကုန်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကို ပြန်လည် အစားထိုးလိုချင်၍ မရနိုင်တော့ပါ။ ၃၂ နှစ် ဝန်းကျင်အထိ ဘဝကအခြေမကျဘဲ အိမ်ထောင် မပြုနိုင် သေးလျှင် လောကကို နောက်ထပ် ရောက်ရှိလာမည့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစား ရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိဘနှင့် သားသမီးကြား အရမ်းကွာဟသွားလျှင် Generation gap ဖြစ်တတ်ပါသည်။ မိဘက သားသမီးကို အရင်းအနှီးထုတ်ပေးယုံမျှဖြင့် အောင်မြင်ကို မပေးနိုင်သောကြောင့် သားသမီးလျှောက်လှမ်းလိုသော လမ်းခရီးကို လမ်းညွှန်ပြသ ပေးနိုင်မှသာလျှင် အောင်မြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်လိုပါလျှင် မိဘသည် သားသမီး၏ ခေတ်ကို လိုက်မီနိုင်ရပါမည်၊ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချကာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ရပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်သည့် အချိန်တွင် နေစဉ်နှင့် အမျှ အခက်အခဲ မျိုးစုံကို အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ကြုံတွေ့ကြရပါမည်။ အခက်အခဲများကို တွေ့ကြုံရသောအခါ ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်သူ၊ စိတ်ရည်သန်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်သူများက ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနိုင်သော်လည်း၊ ဆန္ဒနှင့် တစ်ထပ်တည်း မကျဘဲ ရွေးချယ်မိသူများ၊ တနည်းအားဖြင့် ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းခဲ့သူများသည် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲ အသေးအမွှားများကိုပင် ပုံကြီးချဲ့ကာ ညဉ်းညူတတ်ကြပါသည်။ ငွေအမြောက်အမြား ရနေသော်လည်း လုပ်ငန်း အခက်အခဲကို ခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ အားထုတ်မှု လျော့နည်းလာ တတ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိဘဲ တာဝန်ကျေသာ လုပ်ဆောင်နေလျှင်၊ လကုန်ရက်ကို လက်ချိုးရေပြီး လစာကိုသာ ထိုင်စောင့်နေလျှင် အောင်မြင်မှုနှင့် အလှမ်းဝေးသွားပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ကာလကြာအောင် ဘဝတိုးတက်မြင့်မားနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ လုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူသည် အချိန်နှင့်အမျှ လုပ်ငန်းအကြောင်းစဉ်းစားကာ တီထွင်ကြံဆ နေသောကြောင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန် သေချာပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိရွေးချယ်သော အလုပ်ကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးရပါမည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိမိကိုယ်ကို ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိကြတာလဲ ပြသနာတစ်ခုပါ။
နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ မိမိ၏ စိတ်ရင်းအမှန်ကို မမြင်ဘဲ နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုကို မိမိဆန္ဒ ဟုလည်း ထင်တတ်ကြပါသေးသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် အဆိုပါအချက်များကို ရှောင်ကြည်ပြီး ဆန္ဒအမှန်တိုင်း ရွေးချယ်နိုင်စေရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်နိုင်ရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
သို့ပါ၍ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်ကြမည့် လူငယ်တိုင်း ဆန္ဒ နှင့် ဘဝ တစ်ထပ်တည်းကျကာ ဝါသနာပါရာ လုပ်ငန်းနေရာမှာ အချိန်ကို စနစ်တကျ သတ်မှတ်ကာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါစေကြောင်း ရည်ရွယ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Permalink Reply by Shang Hkawng Ja Gu on February 7, 2013 at 13:54
အစ်ကိုရေညီမတို့ဘ၀က နောက်တစ်ခါမွေး လာမှ ကိုယ်တင်တဲ့Business Management ဘာသာရပ်ကို အသုံးပြုရတော့မယ်။ အခုကလေးတွေပ်အကုန်လုံး ၀ါသနာပါရာလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
Permalink Reply by Wai Phyo Thu on February 7, 2013 at 14:06
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူးရှင့်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Myo Min Oo on February 7, 2013 at 14:23
မိမိကိုယ်ကို ဘာဖြစ်ချင်မှန်းသိအောင် ဘယ်လိုလုပ် ရပါ့ ....ဆရာရေ
Permalink Reply by khin htway win on February 7, 2013 at 14:34
မိမိကိုယ်ကို ဘာဖြစ်ချင်မှန်းသိအောင် ဘယ်လိုလုပ် ရပါ့မလဲ ဆရာ။ လမ်းညွှန်ပေးပါအုံး......
Permalink Reply by AungKoU (UMK) on February 8, 2013 at 1:13
မခင်ဌေးဝင်း တို့ရဲ့ မေးခွန်းက တူနေလို့ တစ်ပေါင်းတည်းဖြေလိုက်ပါတယ်။
သင်တန်းသား/သူ တွေကို မေးလိုက်တိုင်း ဘာလုပ်ချင်မှန်းကိုမသိဘူး လို့ တော်တော်များများ ဖြေကြပါတယ်။ ဒါကလည်း တခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး၊ လွပ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့် မရှိဘဲ ဘောင်ခတ်ပေးလိုက်တဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းလာရလို့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ လူဆိုတာ မွေးဖွားလာကတည်းက ဗီဇ ပါလာပြီးသားပါ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သာ ကိုယ့် ပန်းတိုင်ပျောက်နေတာပါ၊ စေ့စေ့တွေးရင် ရေးရေး ပေါ် ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ သေသေချာချာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစား မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကို လုပ်ရင်ပျော်နိုင်မလဲလို့၊ အဖြေရပြီဆိုတာနဲ့ အချိန်မဆိုင်း ပြင်ဆင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုပါလျင် ဖုန်းဆက်၍ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Yi Lin on February 7, 2013 at 18:21
you sitting nothing to do
Permalink Reply by Martina Kyaw on February 8, 2013 at 7:17
Permalink Reply by Zin on February 8, 2013 at 9:35
Permalink Reply by Wint Phyo on February 8, 2013 at 12:39
Permalink Reply by Kyaw Zaw Hlaing on February 8, 2013 at 20:27
Permalink Reply by zaw phyo naing on February 8, 2013 at 21:34
Permalink Reply by Gyit on February 9, 2013 at 7:15
လူငယ်တိုင်း ဆန္ဒ နှင့် ဘဝ တစ်ထပ်တည်းကျကာ ဝါသနာပါရာ လုပ်ငန်းနေရာမှာ အချိန်ကို စနစ်တကျ သတ်မှတ်ကာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါစေ˜”*°•.****.•°*”˜